ထူးချွန်မွတ်စလင်မ်လူငယ် Archives - News @ M-Media
Post Tagged with: "ထူးချွန်မွတ်စလင်မ်လူငယ်"
IGCSE O-Level ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးရှင် မင်းကောင်းထက်ကိုကို နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
စက်တင်ဘာ ၂၀ ၊ ၂၀၁၆ M-Media ထွဋ်ခေါင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်။ မေး။ ။ ညီလေးရဲ့ အကြောင်းကို အရင် ပြောပြပေးပါလား ။ ဖြေ။ ။ ကျွန်တော့်နာမည်က “မင်းကောင်းထက်ကိုကို” ( မွတ်စလင်မ်[Read More…]
September 23, 2016 — ထူးချွန်လူငယ်
IGCSE O-Level ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးရှင် မမေသဇင်ဝင်း နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
စက်တင်ဘာ ၁၈ ၊ ၂၀၁၆ M-Media သီဟ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်။ M-Media- ညီမလေးရဲ့ အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးပါအုံး။ . ဖြေ။ ။ သမီးနာမည်က မမေသဇင်ဝင်း(ခ) Heena ပါရှင်၊ . မိဘတွေက[Read More…]
September 18, 2016 — ထူးချွန်လူငယ်
၂၀၁၆ မန်းမောင် လူသစ်တန်း ချန်ပီယံ ကိုကျော်ကျော်လွင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
စက်တင်ဘာ ၁၇ ၊ ၂၀၁၆ M-Media သီဟ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသည်။ . ၂၀၁၆ ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်း ကာယဗလ လူသစ်တန်းပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံ ပထမဆု ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ကိုကျော်ကျော်လွင် ကို M-Media မှ[Read More…]
September 17, 2016 — ထူးချွန်လူငယ်
အထက်မြန်မာပြည်မှ တဦးထဲသော Top 10 ဝင်သူ မောင်ချစ်ထွန်းနိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဇွန် ၂၂ ၊ ၂၀၁၆ M-Media မေးမြန်းသူ-သီဟ . ၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ က ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ . ၂၀၁၆ ခုနှစ်[Read More…]
June 21, 2016 — ထူးချွန်လူငယ်